Adobe Illustrator for Mac Download - Rohy fisintomana maimaim-poana
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Malagasy Blog > Adobe Illustrator Ho an'ny Mac Sintomy
Mitady ny Adobe Illustrator for Mac hiasa amin'ny sary vector ary avy eo hizara ny valiny an-tserasera na amin'ny endrika pirinty? Ianaro ny fomba iray ara-dalàna sy azo antoka hahazoana ity rindrambaiko matanjaka ity.
Sintomy ny ADOBE ILLUSTRATOR ho an'ny MAC
Fifanarahana azo ampifanarahina . Ny Mac Illustrator dia mamela ny fanovana ny toeran'ny varavarankely, takelaka ary fitaovana, hahafahanao mamorona tontolo mety indrindra amin'ny asanao. Ankoatr'izay, azo atao ny manao UI vaovao tanteraka, izay endri-javatra vitsivitsy izay mety ho reharehan'ny mpanonta sary, ary hamerina ny zava-drehetra amin'ny fanjakana voalohany raha ilaina izany.
Fidirana amin'ny fananana famoronana isan-karazany . Amin'ny fampiasana Adobe Illustrator Mac, manana sary, horonan-tsary, sary, modely ary atiny famoronana hafa an-tsitrapo mihoatra ny 90 tapitrisa ianao. Ireo entana rehetra dia voalamina tsara ao amin'ny Adobe Stock. Noho ny fanangonana sary an-tsary avo lenta toy izany dia hahita zavatra mety amin'ny tetikasanao manokana ianao.
Preset fanohanana . Ny olona, izay mikasa ny mividy Adobe Illustrator, dia milaza fa tiany fa ity programa ity dia misy preset efa voaomana, mba hahafahan'izy ireo manomboka mamorona tetikasa avy amin'ny pejy banga fa tsy mampiasa modely. Tsy misy teritery ny amin'ny customization ny presets, izay midika hoe afaka manova ny anarana, fironana, isan'ny artboards, sns
tanteraka scalable . Illustrator for Mac dia manaraka fomba hafa amin'ny sary raha oharina amin'ny vokatra mitovy amin'izany. Eto ny sary dia mifototra amin'ny fampitahana matematika fa tsy pixel voatahiry, izay miteraka tsipika mazava sy maranitra izay azo atao pirinty amin'ny lafiny hafa. Ny matihanina dia misafidy an'ity rindrambaiko ity satria afaka matoky izy ireo fa tsy simba amin'ny fizotran'ny asa ny famahana ny sary. Midika izany fa misy fahaizana betsaka kokoa mandritra ny famolavolana haino aman-jery.
Vakio ny Famerenana Adobe Illustrator 2022.
Mamorona rakitra amin'ny habe azo fehezina . Adobe Illustrator Mac dia mamorona rakitra misy habe kely ary tsy hisy olana rehefa manapa-kevitra ny hizara azy ireo amin'ny mailaka ianao. Ankoatr'izay, ny rakitra toy izany dia mandefitra kokoa amin'ny loharanom-pahalalana, izay midika fa tsy fisian'ny fihenan-tsakafo mandritra ny fanodinana. Raha mila mampifanaraka endrika maromaro amin'ny rahona ianao na mizara azy ireo amin'ny tranonkala fizarana sary, dia afaka miatrika ny lahasa amin'ny fomba haingana ianao.
ny hahatanteraka amin'ny sary maro niara- . Ny dikan-teny Mac Illustrator Mac dia mihoatra ny programa hafa avy amin'ity akany ity izay mamela ny mpamorona hiara-miasa amin'ny kanto marobe miaraka amin'izay. Toa safidy tsara ity hanafainganana ny fikoriananao sy hijanonana ho mahomby kokoa rehefa misy sary marobe amin'ny fomba mitovy amin'izany izay azo tsaboina mitovy.
processeur Mpandrindra Multicore Intel miaraka amina tohana 64-bit
ram 4GB (16GB atoro anao)
Rafitra fikirakirana macOS kinova 10.13 (High Sierra), 10.12 (Sierra)
Hard disk habaka 2GB (toerana malalaka fanampiny ilaina mandritra ny fametrahana)
Fanapahan-kevitra Fampisehoana 1024 x 768 (tolo-kevitra 1920 x 1080)
Raha te hihazakazaka sy hampiasa ny Illustrator Mac amin'ny fomba mahomby, ny solosainao dia tsy maintsy mahafeno fepetra arahana teknika sasany. Hamarino raha mifanaraka amin'ny voatanisa etsy ambony ny fampidiran'ny fitaovanao ary raha OK ny zava-drehetra, manomboka mampiasa ity programa ity ho an'ny tetik'asa famolavolana anao.
Raha ny fotoana no tena manahirana anao indrindra ary tianao ny hahatonga ny asanao hahomby araka izay azo atao, dia tena mamporisika anao aho hisintona endritsoratra ho an'i Ai. Nanangona safidy maimaim-poana aho, izay mety hanomboka ny fizotran'ny asa famoronana nataonao.
Sintomy ny fonosana fonosana maimaim-poana
Raha miezaka mamorona endrika mahaliana sy kalitao ao amin'ny rindrambaiko Adobe Illustrator ho an'ny Mac ianao, dia tokony hampiditra endri-tsoratra matihanina amin'ny kitaponao. Jereo akaiky ity seta ity ary safidio ny endritsoratra izay mifanentana tanteraka amin'ny tetikasanao ankehitriny. Misy endritsoratra maoderina, script ary funky, ka azonao antoka fa hisafidy zavatra mety amin'ilay asa ianao.
Zahao endritsoratra maimaim-poana ho an'ny Illustrator misimisy kokoa.